Wararkii ugu dambeyey ee Gobolka Gedo iyo dowlada oo ciidamo hor leh geysay | Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeyey ee Gobolka Gedo iyo dowlada oo ciidamo hor leh...
Wararkii ugu dambeyey ee Gobolka Gedo iyo dowlada oo ciidamo hor leh geysay
Luuq (Caasimadda Online) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo Gobolka Gedo ee mamulka Jubbaland ayaa sheegaya inay halkaas gaareen ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadaas ka dajisay Degmada Luuq ee Gobolkaas, waxaana la filayaa in la kala geeyo Baardheere, Garbahaareey iyo degmooyin kale oo ka tirsan Gobolka Gedo, sida ay illo wareedyo amni u xaqiijiyeen Caasimada Online.
Ciidamada ay Dowladda Maanta ka dajisay Luuq ayaa ku biiri doonaan boqolaal kale oo ay horey halkaas u geysay dowladda, iyadoo ujeedada ay tahay in Maamulka Axmed Madoobe lagala wareego taliska Gobolka Gedo.
Khilaafka u dhaxeeyo Dowladda Dhexe iyo Maamulka Axmed Madoobe ayaa imaaday kadib markii Axmed Madoobe uu diiday inay dowladda faragelin ku sameyso arrimaha doorashadii ka dhacday dhawaan Magaalada Kismaayo ee isaga dib loogu doortay.
Wixii kusoo kordha xiisadda Gobolka Gedo kala soco Caasimadda Online